Tsy maty manota, tsy mety na minia manota… | NewsMada
Tsy maty manota, tsy mety na minia manota…
Tamin’ny andron’Andriamasinavalona, taonjato faha-XVII, no niavian’ny hoe “tsy maty manota“. Nanolo-tena ho sorona hanorenana ny lapa Besakana teny Anatirova tamin’izany i Trimofoloalina. Saingy ny sofiny ihany no nandidiana kely hisian’ny ra mitete, ary akoholahy mena no novonoina ho solony.
Nanomboka teo, natao “tsy maty manota” izy sy ny taranany: avela amin’izay mety ho fahadisoany amin’ny fanjakana. Na izany aza, tsy navela nanaram-po hanao fahadisoana. Nentina amin’ny maha olon-kendry azy ny raharaha: “efa maty no velona“, hany ka tsy mety manota na manao fanahy iniana hanota.
Hafa ny hoe “tsy maty manota” amin’izao: tsy olona mahavita soa ho an’ny tanindrazana na ho an’ny vahoaka, tsy mahafoy tena ho amin’izany… Mifanohitra amin’izany aza ny zava-misy sy izay iainana. Manota fady fa tsy tan-dalàna ny hoe “tsy maty manota“, mambotry firenena, fanetribe, fangoloka, mpanaram-po…
Misy ny akaiky mpitondra, namana na fianakaviana; ao ny mpanao politika, “sakaizan’ny mpandresy”; ny lehibe tsy mba diso… Inona no iresahana izany rehetra izany eto? Na hoe hanova inona ny resaka toy izao… Anisan’ny mahatonga ny mpitondra ho tsy to teny ny fisian’ny “tsy maty manota” ao anaty fanjakana.
“Tsy maty manota“, tsy hoe nahavita inona ho an’ny firenena na tsy azo ilàna, fa zary tsinay homana aty, manaratsy endrika ny fitondrana… manamaimbo tena amin’izany. Na inona lazaina ho asa vita sy fampandrosoana, tsy mahaleo ny fandoto eran-tandroka ny fandio iray siny. Nefa inona izay hoe asa vita sy fampandrosoana eo?
Hahagaga raha tsy atokisana izay karazana rediredy filazana tena na bedibedy fitenenana ny hafa amin’ny hoe: fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fanajana zon’olombelona… Ny eo ambany maso maha akaiky vilany feno arina ny tena aza, tsy hita sy tsy vita. Tsy mety ny mijery arina an-tava.
Ny “tsy maty manota” no manao ny ataony, ka ny vahoaka no “maty tsy manota”? Hafa ny taloha tsy maty manota, tsy mety manota…